खडेरी लागेको फिल्म बजारलाई दशैँले राहत देला ? – Samatal Online
खडेरी लागेको फिल्म बजारलाई दशैँले राहत देला ?
३ आश्विन २०७६, शुक्रबार ३ आश्विन २०७६, शुक्रबार Santa Kumar Shrestha0Comments
काठमाडौं।हिन्दू नेपालीहरुको महान चाड बडादशैँ आउन अब धेरै बाँकी छैन । चौतर्फी दशैँको चर्चा हुन थालेको छ । यता फिल्म बजारमा पनि दशैँको अवसर पारेर नयाँ चलचित्र रिलिज हुने क्रम जारी छ । किनकि, प्रतीक्षित फिल्महरुले दशैँ ताकेर आफ्नो प्रदर्शन मिति तोकेका छन् ।
भोलि शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आउने चलचित्र ‘कबड्डी ३’ को यतिबेला राम्रो चर्चा छ । यसअघि चलचित्रका दुई भाग सुपरहिट भइसकेकाले पनि फिल्मको चर्चा छ । दशैँ नजिकिँदै गर्दा रिलिज हुन लागेको यो फिल्मको स्टारकास्टका कारण पनि उत्तिकै चर्चा छ । चलचित्रमा दयाहाङ राईले काजीको भूमिका निभाउँदैछन् । उनको भूमिकालाई दर्शकले रुचाएका पनि छन् । साथै उनीप्रति सहानुभूति पनि प्रकट गरेका छन् ।
अझ यो भागमा त झन् नयाँ कलाकारको पनि इन्ट्री भएको छ । कमेडी शैलीको यो फिल्म रिलिजअघि नै अनुमान गरिएको छ – यो फिल्म सुपरहिट हुनेवाला छ । यसको अर्को आधार के हो भने, फिल्मले मल्टिप्लेक्समा सर्वाधिक शो पाएको छ । धेरैले यो फिल्मले दर्शक हलसम्म ओराल्ने अनुमान लगाएका छन् ।
यस्तै दशैँको मौका छोपेर अन्य दुई ठूला ब्यानरका चलचित्र पनि निर्माण हुँदैछन् । चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’ र ‘रातो टीका निधारमा’ गरी दुई चलचित्र बढी चर्चामा छन् । यी चलचित्र पनि कमेडी जानरामा नै निर्माण भएका हुन् । यसरी हेर्दा तीनै चलचित्रले दशैँलाई कमेडीमय बनाउनेछन् ।
दीपक–दीपाको चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’ मा केकी अधिकारी पनि छिन् । यस्तै यो चलचित्रमा ‘छक्का पञ्जा’ टिमका कलाकार छन् । जो यसअघिका सिरिजमार्फत हिट छन् । फिल्मको गीतले राम्रै प्रतिक्रिया पाइरहेको छ ।
यस्तै चलचित्र ‘रातो टीका निधारमा’ को पनि उत्तिकै चर्चा छ । यो फिल्म त अझ दशैँ विशेष नै छ । फिल्मको कथाले नै दशैँ ‘इन्डिकेट’ गरेकाले यो फिल्मले दशैँमा दर्शक हलसम्म तान्ने अनुमान गरिएको छ ।
पछिल्लो समय दर्शक नेपाली फिल्म हेर्न दर्शक हलसम्म आएका छैनन् । सम्भावना र आशा जगाएका फिल्मले पनि यसवर्ष खासै व्यापार गर्न नसकिरहेका बेला यी चलचित्रले भने फिल्मको बजारमा केही राहत पु–याउने अपेक्षा गरिएको छ ।